भाइले सोध्लान् नि खै दाजु भन्लान्........ ~ brazesh
July 21, 2009 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट2comments
"भाइले सोध्लान् नि खै दाजु भन्लान्,
अंशै बढ्यो भन्दिए …!"
brazesh July 21, 2009 at 7:35 PM
बायाँ फन्कोमा ब्रजेशले भनेका उमेश त झन् एउटा मानिस थिए । परिवारले नै कसरी कहिल्यै घर फर्केर नआओस् भनेर आफ्नै सन्तानलाई बनारससम्म लगेर हूलमूलमा अलमल्याएर छाड्न सकेका होलान्? 'कहिल्यै कतै नगएका र मानसिक अवस्था ठीक नभएका उमेश दाइ कुन गतिमा होलान् अनि होलान् कि नहोलान्'? लेखकको व्याकुल मनमा खेलिरहेको यस्तो प्रश्न उमेशको परिवारको मनमा आयो कि आएन, थाहा भएन।
Luna July 22, 2009 at 4:17 AM
स्बार्थ को पराकास्टा --------